Madaxweyne Farmaajo oo ku dhacay digniintii Xasan Sheekh + Video - Axadle – Axadle
Muqdisho (Axadle) – Madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa umuuqda in uu dhibane u noqday digniin uu usbuuc ka hor bixiyay Madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud.
Xasan Sheekh ayaa kula taliyay Farmaajo in inta go’aanka uu ku jiro gacanta Soomaalida wada hadalna lagu qabanayo dalka, hadii uu diido uu ka guurayo xerada Afisyoon una guurayo magaalada Kampala ama wadamada kale ee Afrika, halkaas oo uu xal ku heli doono. raadin doonaa.
Hadalkan ayaa yimid markii Madaxweyne Farmaajo tagay DR Congo kana codsaday Madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo Felix Tshisekedi inuu dhexdhexaadiyo dhinacyada daneeya arrimaha Soomaaliya ee doorashada lagu murmay.
“Maanta waa laga tagay, Afisyooni wali waxay ku jirtaa Soomaaliya, Afisyooni wali waa Soomaali, wali waa caasimadii jamhuuriyada, waa la ogyahay, guud ahaan, waxaan ku celinayaa, maanta waxay joogtaa meel wanaagsan, iyadu waxay ku sugan tahay Axadle, Waxay ku sugan tahay Villa Soomaaliya waxayna leedahay “waxay ka timid xero militari waxayna ku sugan tahay garoonka diyaaradaha maanta. Waan dhaqaaqeynaa,” ayuu yiri Xasan Sheekh, madaxweynihii hore, isagoo intaa ku daray in dadka iyo dalkuba aysan ka muhiimsaneyn, awood iyo hub ma awoodaan dalka lagu hayo.
Hadalkii taariikhiga ahaa ee Xasan Sheekh ayaa run noqday maanta markii Farmaajo uu ka codsaday madaxweynaha DR Congo inuu dhexdhexaadiyo Soomaalida, taasoo sidoo kale meesha ka saartay dooddii Farmaajo ee ahayd inuusan doonayn faragelin shisheeye.
Tallaabada Madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale meel ka dhac ku ah shacabka Soomaaliyeed iyo madaxdoodii hore oo muujiyey maamuus iyo sharaf in ay u taagan yihiin dimuqraadiyad waarta.
Astaamaha Farmaajo waxay ka dhasheen diidmadiisa mucaaradka, maamul goboleedyada iyo inuu ku guuldaraystay inuu kordhiyo mudada labada sano ah iyo inuu xaqiiqsaday inaan waxba la isku raacsanayn.
Cali MuxiyadiinCaasimada, London